Yekutakura Wiricheya Yakagadzirirwa iyo Greater Convenience Kugona
Paunenge uchichengeta vanhu vane kuremara kana kurwara, iwe unozoda a kufamba mudziyo kukurumidza uye nyore kutakura ivo vaviri mukati nekunze. A chokufambisa wiricheya sarudzo huru mune ino kesi.
izvi mavhiripu dzakareruka uye hadzina kusimba zvichienzaniswa nedzenguva dzose mavhiripu uye kupa kutakura kwakachengeteka uye nyore kwemushandisi. Inogonawo kupetwa kuitira kuchengetedza zviri nyore. Kune vanochengeta, izvi mavhiripu zviri nyore uye zviri nyore kubata.
Kubva Kune Imwe Nzvimbo Kuenda Kune Imwe
senga mavhiripu dzakagadzirwa zvakananga ku chinja varwere vane kuremara kubva kune imwe nzvimbo kuenda pane imwe. Paunenge uchishandiswa mukati, iyo nhete fomati inoita kuti ipfuure nepakati pemasuo madiki uye mukoridho zviri nyore kwazvo.
Vane mafuremu esimbi anodzivirira mamiriro ekunze uye akareruka uye akapetwa. Mavhiri madiki mana anoita kuti chigaro ichi chichifambika uye vanogona kuyera zvishoma kuita mapaundi gumi nemapfumbamwe.
Mavhiri pane chokufambisa wiricheya irabha yakasimba uye haimbofambi. Kubva izvi mavhiripu usave nemamarimu emaoko seaya anogara aripo wiricheya, mushandisi anofanira kusundirwa nemumwe munhu.
"Step tube" iri kumashure kweiyo chokufambisa wiricheya iyo inobatsira kufambisa chigaro pamusoro pemakona uye zvisina kukwana masevhisi. Zvimwe zvine zvishongedzo zvinowedzera nyaradzo uye nyore kushandisa kune mushandisi uye muchengeti semahombekombe akakurisa uye makumbo anozorora anofamba-kure.
senga mavhiripu zvinonyanya kukosha kune vakwegura pavanenge vachiita zveupenyu hwavo hwezuva nezuva kungave kwekutandara neshamwari, kuenda kuchechi, kutenga kana kuenda kunoona mhuri.
Vanouya zvakanaka kana mushandisi achida kuenda kumisangano yakakosha, kana vari pazororo kana zviitiko zvakaita semichato. Kuenzaniswa nekugara mavhiripu, zvinodhura zvishoma.
Aya macheya akanakira kuchengetedza zviri nyore sezvo achigona kupeta zvakanaka. Huremu hwavo hunovaitawo vakanaka kune avo vane matambudziko emuviri. Kunyangwe kana mushandisi achiri kugona kufamba, kutakura mavhiripu zvichiri imwe nzira huru kune nzimbe uye vanofamba izvo zvisina kunyatsogadzikana kufamba Device.
senga mavhiripu kupa panyama remara uye vakwegura nzira dziri nyore dze kufamba uye zvichavapa kuwedzera kuvimba uye kuona kwakanaka kwehupenyu. Vanonzwa vakasununguka uye kwete sekunge iwo mutoro kune vanovachengeta.